people Nepal » मोर्चाले चुनाव हुनुहुँदैन भनेका छैनन् मोर्चाले चुनाव हुनुहुँदैन भनेका छैनन् – people Nepal
अर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय कार्यालय सदस्य कृष्णबहादुर महरा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको आगामी ०७४ बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नरोकिने बताउँछन् । निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन भएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, यसको तयारी, दलहरुबीचको सहमतिलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर महरासँग पत्रकार पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, अझै पनि जनतामा निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने आधार के छ ?
म सबैभन्दा पहिले सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक दल र आम जनतालाई बैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु । सरकार पूरै निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ । म सबैलाई ढुक्क भएर चुनावी गतिविधिमा लाग्न अपील गर्दछु ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । पहिलो आधार भनेकै यही हो । दोस्रो आधार भनेको जनतामा देखिएको ठूलो उत्साह नै हो । १७/१८ वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन । यसपटक जसरी भए पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर आम जनताको उभार देखिन्छ । देश अहिले चुनावमय भएको छ । अहिले सबै ठूला राजनीतिक दलहरु निर्धारित समयममा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ । उनीहरु पनि निर्वाचनको लागि सहयोग गर्न आतुर देखिन्छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम अवरुद्ध भएको सबैले महशुस गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट निर्वाचनको पक्षमा माहोल तयार भएको छ । यी कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्छ ।
अर्को कुरा केही मधेशवादी दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा केही शर्तहरु राख्नुभएको छ । उहाँहरुले चुनावै हुन सक्दैन भनेर अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन । पछिल्लो समय उहाँहरुले राखेका केही शर्तको विषयमा छलफल भइरहेको छ । खास गरेर जनसंख्याको आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल र बहस चलिरहेको छ । यो छलफलबाट निकास निस्कियो भने हामी चुनावमा सहभागी हुन्छौं भन्ने उहाँहरुको संकेत छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नहुने कुरामा जोड दिइरहेको छ । तर, मधेशी दलहरु संविधान संशोधन नगरिकन निर्वाचनमा नजाने मनिस्थितिमा छन् । दुबै पक्षलाई मिलाउने अब सरकारले के गर्छ ?
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेशी दलहरु दुबै पक्षलाई साथै राखेर वार्ता गरेको छ । हामीले संविधान संशोधनकै विषयमा दुबै पक्षलाई राखेर सहमतिको प्रयास गरेका छौं । संविधान संशोधनका केही विषयलाई अहिले स्थगित गरेर निर्वाचनपछि गर्न सकिन्छ । मधेशी दलहरुले स्थानीय तहको संख्या बढाउने जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा सरकार सकारात्मक छ । हामी यस विषयमा एमालेलाई मनाउने प्रयास लागेका छौं । संविधान संशोधनको सबै विषय समेट्ने र कुनै पनि हालतमा संविधानको एउटा विषय पनि संशोधन हुन नदिने दुबै पक्षका भनाईको मध्यमार्गीको रुपमा सरकारले केही विषयलाई अहिले संशोधन गर्ने गरी निकास निकाल्ने तयारी गरेका छौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि देखिएका छन् भन्नुभयो । तर, संविधान जारी गर्दादेखि नै छिमेकी मुलुक भारत असन्तुष्ट देखिन्छ । यही संविधानलाई संस्थागत गर्ने गरि गर्न थालिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारतको समर्थन होला त ?
मैले अहिले पनि भारत सरकार नेपालमा चुनाव हुने पक्षमा देखेको छु । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसैले पनि चुनाव नहोस् भनेर चाहेका छैनन् जस्तो लाग्छ । यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा पूर्ण समर्थन छ ।
तपाई अर्थमन्त्री भइसकेपछि धेरै नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याउनुभयो । विशेषतः दाङ र रोल्पामा धेरै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यी जिल्लाका कुन–कुन क्षेत्र पछाडि परेको महशुस गर्नुभएको छ ?
बजेट दाङ र रोल्पामा मात्रै प¥यो भन्ने होइन । ७५ वटै जिल्लामा बजेट परेको छ । ठाउँअनुसार अलि कम र बेसी भएको हुन सक्छ । हामीले यो बजेट अघिल्लो सरकारले बनाएको मुल बजेट भित्रै रहेर परिचालन गरेका हौं । हामीले स्रोतको सुनिश्चितता गरेका मात्र हौं । यो भनेको पुरक बजेट पनि होइन । केही रकम जो खर्च हुन सक्दैन त्यसलाई हामीले साना तिना विकासमा परिचालन गरेका छौं । तपाईले भने जस्तै दाङ र रोल्पा र समग्र मुलुकलाई नयाँ बजेटमार्फत् नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । दाङमा केन्द्रीत भएर सोच्नुपर्दा दाङमा एयरपोर्ट छ तर सञ्चालन हुन सकेको छैन । दाङलाई हामीले पश्चिम नेपालकै विकासँग जोड्न सक्छौं । विशेषतः दाङलाई पहाडी जिल्लाहरुसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ । लुम्बिनीलाई दाङ हुँदै रारासँग जोड्ने कल्पना गरिएको छ । अब हामीले दीर्घकालीन रुपमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दाङमा बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार विकासअन्र्तगत दाङबाट पहाडी जिल्ला जोड्ने सबै सडकको स्तरोन्नति गर्नैपर्छ । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र बन्दै गएको छ । त्यसलाई दाङसँग जोडियो भने र कर्णालीको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको रारा ताललाई दाङसँग जोड्न सकियो भने तथा अन्य पर्यटकीय स्थलहरुसँग जोड्न सकेमा दाङको भविष्य राम्रो छ ।
प्रदेशको राजधानीको अन्तिम निर्णय त प्रदेश सभाले नै गर्ला । तर, सरकार र तपाईको पार्टीको धारणा के छ ?
अहिले सरकारमा यो विषयले प्रवेश पाएको छैन । तर, मेरो धारणा भन्नुहुन्छ भने पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ हुनु नै सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ । दाङ बाहेकको सम्भावित ठाउँ भनेको बुटवल र नेपालगञ्ज हो । ती क्षेत्रहरु अहिले व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकसित भएका छन् । राजनीतिक राजधानीको रुपमा दाङ सबैभन्दा उपर्युक्त ठाउँ हो । यो विषयमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुसँग बहस र छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा यो विषय छलफलको रुपमा अघि बढेको छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी के नारा लिएर जनता समक्ष जाँदैछ ?
राजनीतिक नाराको रुपमा हामीले संघीय संरचनामा स्थानीय निकायबाट तह बन्यो यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भनेर स्थापित गर्दै छौं । यो राज्य पुनःर्संरचना र संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा हो । यही मुद्दालाई हामीले जनता कहाँ लैजान्छौं । दोस्रो कुरा स्थानीय तहमार्फत् जनताको हातमा सत्ता दिने कुरा हो । जनताको हातमा सत्ता आइसकेपछि स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्ने र केन्द्रीत स्रोत साधन प्रयोग गरेर समृद्ध मुलुक बनाउने कुरा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । समृद्ध मुलुक बनाएर जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा नै माओवादी केन्द्रको प्रमुख लक्ष्य हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिसकेको छ । केही दलहरुले उम्मेदवारको मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार छनोटमा मापदण्ड के हो ?
माओवादीले उम्मेदवार छनोटको आधार तयार गरिसकेको छ । हामीले उम्मेदवार छनोटका लागि कार्यविधि नै बनाएका छौं । मुख्यतः जनताको मन जित्न सक्ने उम्मेदवार नै पार्टीले उठाउनुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक रुपमा संगठनमा राम्रो पकड भएको र जनतासँग राम्रो सम्बन्ध भएको मान्छेलाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।
उम्मेदवार छनोटको काम कुन कमिटिले गर्छ ?
अहिले हामीले उम्मेदवार छनोटमा प्रशस्त मापदण्ड बनाएका छौं । वडाको हकमा वडाले बढीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र गाउँ या नगरले त्यसलाई निर्णय गर्ने भन्ने छ । त्यसको अनुमोदन जिल्लाले गर्छ । गाउँ या नगरको हकमा गाउँ या नगरले बढीमा तीन जनाको सिफारिस गर्ने । जिल्लाले निर्णय गर्ने र प्रदेशले त्यसको अनुमोदन गर्ने छ । महानगरपालिकाको हकमा प्रदेशले त्यसको सिफारिस गर्ने र केन्द्रले निर्णय गर्ने हुन्छ ।
र, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म आम जनसमुदायलाई स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटा उत्सवको रुपमा लिन अपील गर्दछु । पहिलो पटक स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएको छ । स्थानीय तहमा आधारित भएर पहिलो पटक नै निर्वाचन हुँदैछ । केन्द्रमा रहेको एकात्मक ढाँचाको राज्यसत्ताको पावर फेरि हामीले जनता कहाँ फर्काउँदै छौं । यसलाई हामीले महान जनयुद्दको उपलब्धिको रुपमा सम्झनुपर्छ । यो जनआन्दोलनको पनि उपलब्धि हो । विगतमा जनताले गरेका विभिन्न संघर्षका प्रतिफलको रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । हामीले स्थानीय तहमा भोट हाल्दा देशको परिवर्तनको पक्षमा लड्नेहरुलाई नै साथ दिनुपर्छ भन्न चाहन्छु ।